निर्दोष आलमलाई फ’साउन राज्य, मिडिया र सामाजिक सञ्जाल सबै लागे – अधिवक्ता श्रेष्ठ ! – Life Nepali
निर्दोष आलमलाई फ’साउन राज्य, मिडिया र सामाजिक सञ्जाल सबै लागे – अधिवक्ता श्रेष्ठ !
काठमाडौं। इँटाभट्टामा जि’उँदै मान्छे ज ला उने गम्भी’र अ’परा’धमा संलग्न मोहम्मद अफ्ताब आलमको पक्षमा बहस गरिरहेका नेपाल बारका पूर्वमहासचिव रमण श्रेष्ठले आलमलाई फ’सा’उन राज्य, मिडिया र सामाजिक सञ्जाल योजनाबद्ध ढंगले लागेको जिकिर गरेका छन्। पटकपटक चुनाव जितेर मन्त्री भएका लोकप्रिय नेता आलमलाई राजनीतिक रूपमा हराउन नसकेपछि वि’रो’धीहरूले ब म वि’स्फो’ट गराएर ह त्या गरेको झुटा तानाबाना बुनेको श्रेष्ठले दाबी गरेका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।
‘आलम पटकपटक चुनावबाट निर्वाचित भए । मन्त्री भए । उनका वि रोधीले यो देख्न सकेनन् । राजनीतिक रूपमा हराउन नसकेपछि आलमलाई फसाउन झु’टा घ’ट’ना रचना गरियो । त्यसैले वि स्फो टको घटना नै पूरापूर झुटा र काल्पनिक हो । तानाबाना बुनिएका हुन्,’ बुधबार जिल्ला अदालत गौरमा आलमको पक्षमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने।
यो पनि पढ्नुस – रवीना देशराज समकालीन समाज भन्दा बेग्लै सोच राख्ने ब्यक्तिका रुपमा चिनिन्छिन् । उनी लैंगिकताका विषयमा परम्परागत सोच विपरित धारणा राखेर र आफ्नो विकिनी तस्बिर सार्वजनिक गरेर पनि चर्चामा छिन् । अभिनेत्री प्रियंका कार्कीसँगै विकिनीमा उनको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भएपछि त्यसले ठूलै चर्चा पायो । उनका छोरा आयुष्मान देशराज पनि अभिनेता हुन् । अभिनेत्री कार्की र आयुष्मान प्रेम सम्बन्धमा रहेका गसिपहरु पनि मिडियामा छाइरहन्छन् ।
सन्तान जन्माउन बिहे गर्नु नपर्ने बोल्ड धारणा राख्दै आएकी रवीना देशराजसँग प्रचलित सामाजिक ब्यवस्थाका बारेमा चक्रपथ डटकमका लागि बिनु पोखरेलले गरेको कुराकानीको केहि अंश साभार गरेका छौ :- महिला झन बोल्ड हुँदै गएपछि परिवारमा बिखण्डन आइरहेको छ भन्छन्, हो त ?मेरा एकजना आफन्तसँग एकदिन कुरा गर्दैथिएँ । उहाँले एउटा ग्यादरिङमा हजुरवा, हजुरवाका तीनजना श्रीमती र छोराछोरी सबै जम्मा भएको भन्नुभयो । ल त्यहि ठाउँमा हजुरआमाका तीनजना श्रीमान जम्मा भएको भनौं त ?
एउटा पुरुषका तीन श्रीमती एकै ठाउँ भेला हुनुलाई स्वाभाविक रुपमा लिने समाजले एउटी महिलाका तीन श्रीमान एकैठाउँ ग्यादरिङ गरेको पचाउन सक्छ ? पुरुषहरु खुला रक्सी, चुरोट खान्छन् । ल हामी खाउँ त, के भन्छ समाज ? अहिले जे जे भएको छ त्यो सबै महिलाले सहिदिने भएर हो । उसले तीनवटा ल्याउँदा, १०औं जनासँग सेक्सुअल रिलेशनमा रहंदा, चुरोटले डाम्दा पनि सहिदिए मात्र परीवार जमेको देख्ने, त्यसलाई नसहे परीवार विखण्डन भएको देख्ने ? त्यो घर, घर नहुने अनि महिलाले बरु एक्लै बस्छु भन्दा परिवार भड्किएको भन्ने ? अब महिला हरुले पनि आफ्नो शक्ति थाहा पाए । अब त्यसैगरी सहंदैनन् ।
जो आर्थिक रुपमा सक्षम छन् दवावमा रहन्नन् । त्यसो हुनु समाज विग्रिएको होइन । बिग्रिएको समाजको रुप देखिएको मात्र हो । हिंसामा पुरुष छन् भने पनि त्यहि हो । ल न, म दुईटा श्रीमान राख्छु भन्छु । मान्छ त समाज ? तर हामी त्यसो गर्दैनांै । गर पनि भन्दैनौं । महिला र पुरुषमा फरक सामाजिक सोचाई हुनु भएन भनेको मात्रै ।यसो सोचौं न, दुईजना एक हुने भनेको दुईटाको खुशी जोड्दा झन् खुशी हुन सकिन्छ कि भनेर हो नि । स्वतन्त्रता मार्न त होइन । श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ तर बोलचाल छैन । दुईतिर फर्केर सुत्नुहुन्छ ।
अर्को एक्लै भएको मान्छे गीत लगाएर नाच्दै बस्छ, खुशी हुन्छ ।स्वतन्त्रताले हो नि खुशी ल्याउने । अचेल म सुन्छु–, अहिले त धेरै परीवारमा महिला, पुरुष दुबै कामकाजी छन् । केटाले म आज डिनर बाहिरै गरेर आउँछु भन्यो भने, केटी पार्टनरले पनि हस् मेरो पनि पार्टी छ आउन ढिलो हुन्छु है भन्छे रे । अनि त्यो पुरुष पार्टनर ढक्क हुन्छ रे । उसले गरुन्जेल काम साथीले गर्दा नकाम भन्ने हुन्छ ? भन्नुस् त ।तपाईंको समाजिक संजालमा आएको एउटा फोटोबारे कुरा जोड्न मनलाग्यो । तपाईं र अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले विकिनी लगाएको तस्बिर पोष्ट गर्नुभयो ।
Previous बान्ता नआउने औषधि भनेर लठ्याउने सुई लगाई आफन्तबाटै भारतमा १० हजारमा बे’चिइन् !
Next ग्यासको लाइनमा नबस्नुहोस, बिजुलीमै खाना पकाउनुहोस: कुलमान !